Gbasara Anyị - GUODA (Tianjin) sayensị na teknụzụ mmepe Inc.
Ọkachamara n'ịmepụta igwe na azụmaahịa, GUODA(Tianjin) sayensị na teknụzụ mmepe Inc. na-ewepụta ụdị ịnyịnya ígwè niile, gụnyere igwe eletriki na igwe eletriki, igwe eletriki eletriki na skuuta, ụmụaka ụmụaka na ụmụaka, na-achọ ahụmịhe ịgba ịnyịnya ka mma na ndụ kwa ụbọchị. Na 2007, anyị gbara mbọ imeghe ọkachamara ụlọ ọrụ iji rụpụta igwe eletrik. Na 2014, GUODA Inc. guzobere na eze na Tianjin, obodo kachasị na ọdụ ụgbọ mmiri mba ọzọ na Northern China. Na 2018, nke sitere na "Belt and Road Initiative" Ie "The Silk Road Economic Belt na 21st-Century Maritime Silk Road", e guzobere GUODA (Africa) Limited iji nyochakwuo n'ahịa mba ụwa. Ugbu a, ngwaahịa anyị na-enweta nnukwu ewu ewu n'ụlọ na mba ofesi.
Anyị na-achọ ịbụ onye mmekọ azụmahịa gị na-eguzosi ike n'ihe na ịmepụta mmeri mmeri dị ebube n'ọdịnihu!